निस्तार-चाड मानेमा के परमेश्वरबाट सुरक्षा पाउन सकिन्छ ? - परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज
निस्तार-चाड मानेमा के परमेश्वरबाट सुरक्षा पाउन सकिन्छ ?
374 हेरेको संख्या
हिजोआज विपत्तिसम्बन्धी खबरहरू समाचारमा धेरै सुनिन्छ । त्यसैले होला हामीबाट विपत्ति पार गराउने निस्तार-चाडबारे म अक्सर सोच्न पुग्छु ।
विपत्तिसम्बन्धी खबरहरू जति धेरै सुन्यो त्यति नै मुक्तिको सन्देश अमूल्य लाग्छ । निस्तार-चाडचाहिँ यसको नाउँ आफैले बताएजस्तै, हामीबाट विपत्तिहरू पार गराउने चाड हो ।
मानिसहरूले निस्तार-चाड मानेर विपत्तिबाट सुरक्षा पाएको घटना के वास्तवमै घटेको थियो ?
हजुर, थियो ! करीब ३,५०० वर्षअघि पहिलो पटक निस्तार-चाड मनाइएको समयमा यस्तो घटना घटेको थियो ।
​“तिमीहरूको पाठो खोटरहित होस्– एक वर्षको पाठो । तिमीहरूले त्यो भेडा अथवा बाख्राबाट लिनू । त्यो तिमीहरूले त्यस महिनाको चौधौँ दिनसम्म राख्नू, र इस्राएलको समुदायका सबै मानिसहरूले यो बेलुकीपख मारून् । … त्यस रात म मिश्र भएर जानेछु, र मिश्रका मानिस र पशु दुवैका पहिले जन्मेका र बियाएकाहरूलाई मार्नेछु, र मिश्रका सबै देवताहरूका विरुद्धमा म इन्साफ गर्नेछु । म परमप्रभु हुँ । तिमीहरू बसेका घरहरूमा त्यो रगत तिमीहरूका निम्ति चिन्ह हुनेछ । जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु, र मैले मिश्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिमीहरूलाई छुनेछैन ।” प्रस्थान १२:५-१३
मिश्रका मानिस र पशु दुवैका पहिले जन्मेका र बियाएकाहरू सबैलाई नष्ट गर्ने त्यो महाविपत्ति झर्दाखेरि निस्तार-चाड मानेका इस्राएलीहरूले चाहिँ सुरक्षा पाएका थिए ।
मैले मिश्रमा झरेका दश विपत्तिहरूबारे सुनेको त थिएँ, तर इस्राएलीहरूले निस्तार-चाड मानेकाले उनीहरू बचाइएका थिए भन्ने कुराचाहिँ मलाई थाहा थिएन । यद्यपि निस्तार-चाडको प्रतिज्ञा त्यो समयको लागि मात्र थियो नि, होइन र ?
निस्तार-चाड एक यस्तो चाड हो, जसमा रहेको परमेश्वरको प्रतिज्ञा जुनसुकै युगमा पनि मान्य हुन्छ । इस्राएल देश दक्षिणमा यहूदा र उत्तरमा इस्राएल गरी दुई राज्यमा विभाजन हुँदा, यहूदाका राजा हिजकियाले लामो समयसम्म नमनाइएको निस्तार-चाड मान्नको निम्ति दक्षिण यहूदामा मात्र नभएर उत्तर इस्राएलमा पनि समाचारवाहकहरू पठाए । तर उत्तर इस्राएलका मानिसहरूले महत्त्वपूर्ण सन्देश ल्याएका समाचारवाहकहरूको गिल्ला र हाँसो गरे । अन्त्यमा दक्षिण यहूदाले मात्र निस्तार-चाड मान्यो । त्यसको परिणाम के भयो भन्नेबारे म तपाईंलाई देखाउँछु ।
… अश्शूरका राजा शलमनेशेरले सामरियामाथि आक्रमण गरे, र त्यसलाई घेरा हाले । तीन वर्षसम्म घेरा हालेपछि अश्शूरीहरूले त्यो कब्जा गरे । यसरी हिजकियाको छैटौँ वर्षमा, जो इस्राएलका राजा होशियाको नवौँ वर्ष थियो, सामरिया कब्जा गरियो । … यो यही कारण भएको थियो, कि तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गरेका थिएनन्, तर उहाँको करार, अर्थात् परमप्रभुका दास मोशाले तिनीहरूलाई दिएका सबै आज्ञालाई तिनीहरूले उल्लङ्घन गरेका थिए । तिनीहरूले न त आज्ञाहरूमा ध्यानै दिए, न ती पालन गरे । २ राजा १८:९-१२
निस्तार-चाड नमानेको उत्तर इस्राएल अन्ततः नष्ट भयो ।
त्यसोभए निस्तार-चाड मानेको दक्षिण यहूदाले के परमेश्वरबाट सुरक्षा पायो त ?
अवश्य ! यहूदालाई आक्रमण गर्न अगाडि बढेका अश्शूरी सेनाहरूलाई नष्ट गर्न परमेश्वर स्वयम्‌ले स्वर्गदूत पठाउनुभयो ।
“फेरि यहूदाका घरानाका बाँचेकाहरूले भूइँमुनि जरा हाल्नेछन्, र जमिनमाथि फल उमार्नेछन् । … मेरो खातिर र मेरो दास दाऊदको खातिर म यस सहरलाई रक्षा गर्नेछु र बचाउनेछु ।” त्यस रात परमप्रभुका स्वर्गदूत निस्के, र तिनले अश्शूरको छाउनीमा एक लाख पचासी हजार मानिसहरूलाई मारे । जब भोलिपल्ट बिहानै मानिसहरू उठे, त्यहाँ सबै लाशहरू मात्र थिए । २ राजा १९:३०-३५
वास्तवमा दक्षिण यहूदाचाहिँ सैन्य शक्तिमा उत्तर इस्राएलभन्दा कमजोर राज्य थियो । तैपनि यहूदाका मानिसहरूले आफ्नो राज्यलाई रक्षा गर्न सकेका चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको प्रतिज्ञा समाविष्ट निस्तार-चाड मानेकाले थियो ।
वाह ! निस्तार-चाडमा त्यति महान् शक्ति छ भन्ने मलाई थाहै थिएन ।
परमेश्वरको प्रतिज्ञा पक्का छ । निस्तार-चाड मानेर सुरक्षा पाएको विगतका इतिहासहरू वर्तमान युगमा जिइरहेका हामीहरूको निम्ति शिक्षा हो, परमेश्वरले हामीलाई निस्तार-चाड मानेर सुरक्षा प्राप्त गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
अघिअघि लेखिएका कुराहरू हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेखिएका थिए, … रोमी १५:४
त्यसोभए निस्तार-चाड मान्ने विधि परिवर्तन भएको हो ? हामी अहिले किन थुमा बलि गर्दैनौं ?
वर्तमान युगमा हामी थुमा बलि गरेर निस्तार-चाड मान्दैनौं । येशूज्यूले हामीलाई सजिलो गरी मान्न सकिने नयाँ करारको निस्तार-चाडको विधि दिनुभएको छ ।
उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “मैले दुःख भोग्न अघि नै यो निस्तार-चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठूलो इच्छा गरेको थिएँ,” … अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनुभएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, “तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो । मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर ।” यसै गरी खाइसक्नुभएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, “यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो ।” लूका २२:१५, १९-२०
परमेश्वरको मण्डलीचाहिँ बाइबलको शिक्षाअनुसार निस्तार-चाड मान्ने एकमात्र मण्डलीको रूपमा परिचित छ । यस मण्डलीमा हामीले परमेश्वरको इच्छाअनुसार पूर्ण रूपले निस्तार-चाड मान्न सक्छौं ।
म पनि नयाँ करारको निस्तार-चाड मानेर सुरक्षित रहनेछु । परमेश्वरले सधैँ सुरक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्कै छु ।
हिजकियाले जस्तै मैले पनि तपाईंलाई सँगै निस्तार-चाड मान्नको लागि आग्रह गर्न सकें, म एकदमै खुशी छु । यस्तो असल खबर सुनाउन सक्ने गराइदिनुभएका परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु ।